RADIO HARGEYSAAY HADALLADAA XAJIINTA LEH, HAL-BAA LAGAA YIDHI | Toggaherer's Blog
« Tacsi:- INAALILAAHI WA INAA ILLAAYHI RAJACUUN
WAA MAXEY FARQIGA U DHEXEEYA XISBUL ISLAAMKA HASAN DAHIR IYO KOOXDA AL-SHABAAB?.. »
RADIO HARGEYSAAY HADALLADAA XAJIINTA LEH, HAL-BAA LAGAA YIDHI
“Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib ayuu ahaa markii Radio Hargeisa uu Hawada galay. Magaciisuna wuxuu ahaa Radio Kuluc….Waxaana laga sii dayn jiray halka Saldhigga dhexe ee Boolisku ku yaalo, wakhti yarna wuu hadli jiray. Dabadeedna waxa lageeyey halka TAARDHEER loo yaqaaney oo Wasaaradda Boostada iyo Isgaadhsiintu hadda degentahay, waxaana markaasina loo bixiyey Radio Somali. Halkan aynu Maanta fadhino ( Waa Goobta Maanta Radio Hargeysa ku taalo’e ) ayaa ku xigtay……Maalintaasi xattaa qalabkan wax lagu duubo lama aqoon. Markii la keenay Record-dhada wax lagu duubo, wariyeyaashii ku hawlgalay waa lala yaabay, waxaanay dadkii yidhaahdeen Ninkani Macquulba maahee hala qabto. Malaha waa nooc kale oo Bani’aadmiyee. Halisbaanay galeen. Hadana wakhtigaasi Radio Hargeysa qalabkii yiiley iyo maanta ka yaalaa Cirka iyo Dhulkay isu jiraan…Alxamduliaah. Istuudyahan Maanta aynu dhex fadhino, haybadda ka muuqata iyo quruxdiisa waa mid Ilaahay loogu mahad-naqo. Laakiin Indhaha bukaa iyagu ma arkaan.
Hadaba saxaafadda oo sidaa u wada koraysa, dalka horumarkiisoo sidaa u wada socda, ayaa kuwii ugu gaabiska ahaa ee MA-KOREYAASHA ahaa, Waa WARGEYSYADA’E, Waayo 15sanadoodbay soo baxayeen Afar Bogna ma dhaafaan. Waxaanu leenahay MA-KOREYAALOW idinna soo kora, oo saxaafadda kale la saanqaada.’’
Hadaba MA-KOREYAASHAA ayaa hadana, kuwii koray ay had iyo jeer kadaba qaylinayaan. Waxaanan leenahay, hadaanu nahay Bahda Raadyaha iyo TVga, annagu waanu kornaye, idinkaa hadhaye ( Waa Wargeysyadam ) Idinna soo kora.
MA-KOREYAALOW Idinna soo kora waxay ka mid yihiin ama Udub-dhexaadba uu u ahaayeen Maqaalkaa aynu kor ku xusnay, kaasoo ahaa Hadallo dhagahii dhagaysanayey ee u dhuun daloolay ay u qaadan waayeen, Qofka hadda isha mariyeyna, laga yaabo inuu isna ka yaabo Hadalladaa dambe ee Dhaliisha aan loo meel dayina. Hadalladaasoo kasoo yeedhayey ama kasoo baxayey Idaacadda Dinniiqa ah ee Radio Hargeysa, Maalintii Khamiista ee Bishuna ahayd 18/06/2009ka, Barnaamijkii XOG-OGAAL oo Maalinnimadii iyo Habeenkii oo ku celisaba ka baxa Idaacadda.
AHEEY AH ! Ma aanan ka filayn Radio Hargeysa, inay dhasheeda Cunto, Sida Bisaduhu markay gaajoodaan ee ay dhashooda cunaan oo kale. Hubaashii RH maanta AFba uma bannaana,Waxaan leeyahay Ridu hadday Dub leedahay Dabadeeday ku qarin lahayd.
Maah-Maah Soomaaliyeedbaa tidhaahda “ Af nooli waa hadlaa, Eyna waa Ciyaa’’ waxaanan uga golleeyahay hadalladaa xajiinta ah ee Radio Hargeysa ay kula dul kuftay Wargeysyada Somaliland kasoo baxa, iyagoo ah kuwa Maanta Calanka u haya guud ahaan Saxaafadda Soomaalida, Gaar ahaan S/land, Siiba Wargeysyada.
Run ahaantii markay saxaafad noqoto, Reer Somaliland waxa kaliyee lagu majeertaa wakhtigan casriga ah waa War-sidayaasha Wargeysyada. Kuwaasoo ilaa Maantadan aynu joogno aan lahayn wax inna soo haybsada, markay noqota dhanka Joornaalada.
Wargeysyad Dalka waxaan odhan karaa, waa Muraayadda kaliyaata ee sida saafiga ah looga daalacdo Xaqiiqada ka jirta Dalka. Waa kuwo mar walba u heellan sidii ay Qalinkooda wax ugu qaban lahaayeen Diintooda Dadkooda iyo Dalkoodaba. Sidaasi daraadeed waxay innaga mudan yihiin Abaal, Xushmayn iyo Qadarinba. Laakiin may mutaysan hadal meel waayey oo heehaabaya in lagula dul kufo. Kollay Rukun adag inay yihiin Ninkii Geesiyii wuu garanayaa Nacasna loo sheegi mayo. Intaa aan ku dhaafo Kaalinta Wargeysyadu kaga jiraan Dalka.
Hadaan wax yar ku laabto Radio Hargeysa, waa lawada ogsoonayahay, inay iyada laftarkeedu tahay Hooyada Idaacadaha Afsoomaaliga ku hadla, Hooyada Barbaarta Saxaafadda, Hooyada Kaydka Fanka iyo Suugaanta, waayo waa ta kaliyaatee Tix iyo Tiraaba u abtirisa. Waxaana Xaqiiqdii laga wada dheregsanyahay Doorkii ay kasoo cayaartay Saxaafadda iyo Suugaanta Soomaalida.
Ka hor intii aan dib loo xorayn dalka, Kaalintii ay kaga jirtay Saxaafadda Geeska, waa Sida Dayaxa, Sacabana laguma qarin karo. Kadib lasoo noqoshadii Madaxbannaanida Somaliland-na waynu ogsoonahay Doorka ay ka qaadatay Horumarinta Saxaafadda Somaliland.
Anigu Shakhsiyan, waxaan qiimayn ku sameeyey, inta u dhaxaysa laga soo bilaabo 1991 ilaa 2009ka, Wariyeyaashii kasoo shaqayn jiray ee la jaan-qaaday intii dib loogu soo noqday Dalka, waxaanan helay oo iisoo baxday inay yihiin kuwa ugu tayada fiican dhanka TVyada iyo Idaacadaha Maanta jira. Inkastoo badankoodu isaga hulleeleen Radio Hargeysa, bal hadana aan qaarkood magacaabo, waxaanan ka raali galinayaa inta uu qalinku ka tagay anoon u kasayn, waxaana ka mida Maxamed Xasan Cali (Waji), C/laahi Jaamac Maxamed, Maxamed Xuseen Cali (Abees), Xuseen C/laahi Deeqsi, Cali-Caana-dhame, Khadar Maxamed Cakule, Abiib Iimaan Xassan, C/raxmaan Xirsi (Heello), Xassan Maxamed Yuusuf, Shaadiya Maxamed Rooble, Safiya Cali Xuseen, Sahra Ciidle Nuur………… iyo Wariyeyaal kale oo badan oo Hormoodka RH ahaan jiray.
Waxaan ogaaday markii aan isku soo xooriyey qiimayntaasi aan sameeyey, inay Radio Hargeysa, ay ahayd Jaamacad soo saari jirtay Jiil ama Fac hanan kara ama lagu aamini karo Hayaanka dheer ee Warbaahineed.
Hadaba Akhristow, iska dhaaf wariyeyaal ay RH carbisee, Goormaa kuugu dambaysay erayada aha “ Radio Hargeysaa sheegtay ama Radio Hargeysaa baahisay ama sii daysay’’
Run ahaantii Idaacaddii wax weynbaa ku habsaday, waana la wada ogsoonayahay halkay sartu ka qudhuntay. Waxaanan leeyahay:
Haday sii wado
Waxaa jira dadow
Waaba la ogaan.
Ugu dambayntii waxaan Ilaahay uga baryayaa Radio Hargeysa inuu ka dul qaado Heeryada saran, ee ay la hagaastay. Waxaanan ku boorinayaa Bahda Radio Hargeysa oo uu ugu horreeyo Wariyaha Ruug-cadaaga ah Maxamed Xassan Cai ( Waji ), inay joojiyaan hadallada raqiiska ah, ee aan filayo in aanu Afkoodii ahayn, lakiin aan is idhi waa laga dhex hadlayaa. Hadal iyo Dhamman waxaan kusoo Afmeerayaa oo aan odhan lahaa Radio Hargeysa Erayadan Kooban:
Kortay oo Kobocdaye
Maxaa kugu Ceshay
Kobtii aad ka timi ?
Aad la kuududo
Aan loo kal dayin ?
Wasalaamu Calaykum Waraxma tullaahi Wabarakaati.
Ilaahay Ha inna waafajiyo Khayroo dhan.
Qore: C/salaam Cusmaan Cumar-jeex
This entry was posted on June 21, 2009 at 3:51 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.